Soo dejisan Easy Cut Studio 5.0.0.2 – Vessoft
WindowsKuwa kaleSoftware kaleEasy Cut Studio
Bogga rasmiga ah: Easy Cut Studio
Isticmaalka Easy Cut Studio – barnaamijka daabacaadda, naqshadeynta iyo jarista noocyada kala duwan ee garaafyada leh cutoolin vinyl ama goynta qalabka. Nidaamku wuxuu bixiyaa dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah si loo abuuro jaantusyada xirfadeed sida logos, calaamadaha vinyl, xarafka ama sawirrada baabuurka ku duuban oo daabacana inta badan jaranjarada ama sheyada ka soo jeeda markab caan ah. Studio Cut fudud wuxuu ka kooban yahay qalabka loogu talagalay raadinta sawirka, gaabinta marinka, qoraalka iyo qaababka isku-biirinta, la shaqeeya lakabyada, iwm. Barnaamijka wuxuu gooyn karaa nooc kasta oo TrueType ama OpenType, u rogaan sawirro raajo ah jarista iyo dhoofinta ama keenidda badi qaababka faylka. Easy Cut Studio wuxuu si fudud u fududeynayaa jarida iyo hagaajinta iyada oo loo mahadcelinayo nadaafadaha kala duwan ee naqshadeynta mashiinka dhejiska ah iyo awood u leh inuu xakameeyo xawaaraha jarista iyo cadaadiska haddii mashiinkaagu uu taageerayo tilmaantan.
Xakamaynta buuxda ee cutubka vinyl
Raadinta sawir iyo iskudhafid
Isbedelka SVG galay FCM
Qaadka ayaa gooyey
Soo dejisan Easy Cut Studio
Faallo ku saabsan Easy Cut Studio
Easy Cut Studio Xirfadaha la xiriira